Home विशेष लेख अनामको यात्रा र अबको बाटो
केही बर्षको सुस्ताईपछि पुनः जुर्मूराएको अनामले यो बर्ष नयँ सडक नाटक ‘अबको बाटो ’ पूर्वका १० जिल्लाका २ सय ४५ स्थानमा प्रदर्शन गरेर जनताको भरमार ताली बटुल्न सफल भएको छ । २०४५ सालको जनआन्दोलन लगत्तै प्रदर्शन गरिएको ‘दमनको राप’सडक नाटकमा मैले पनि पहिलो पटक अनामका कलाकारहरुसंग हिड्ने मौका पाएको थिए ।
त्यतिबेला मेरो र राजेन्द्र रिमालको भूमिका भनेको नाटक देखाई सकेपछि टोकरी थापेर दर्शकहरुबाट आर्थिक संकलन गर्ने र कलाकारलाई खान, बस्न र यातायातको व्यवस्थापन गर्नु थियो । खर्चबर्चको जोहो नगरी जहा जे पाईन्छ त्यही खँदै १० जना कलाकारको टोली लिएर त्यतिबेला ३० औं पटक नाटक देखाउदै काकडभिट्टा सम्म पुगेका थियौं । जनआन्दोलनको नौलो विहानीमा नै सुरु गरेको त्यो नाटकले दर्शकहरुबाट अपार माया र सद्भाव पाएको थियो । तर अहिलेको परिस्थिती धेरै सुगम र विषयवस्तुमा ठूलो अन्तर छ ।
‘दमनको राप’पञ्चायती शासकको ज्यादती र दमनको विरुद्धमा थियो भने यसपालिको नाटक ‘अबको बाटो’ आफुले आफैंलाई सच्याउनु पर्ने र जनआन्दोलनहरुबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्नु पर्ने सन्देश लिएर गाउ छिरेको थियो । नाटकमा लाग्ने खर्चको चाँजोपाँजो आरडीआईएफ नामको एक विदेशी दातृ संस्थाले मिलाएको हुनाले कमसेकम टोकरी बोक्न परेन । बरु एक दुई महिना धराने कलाकारलाई हातमुख जोड्न सहयोग नै पुग्यो ।
एउटा पर्यवेक्षकको रुपमा अबको बाटो मैले धरान, लहान, गाईघाटसम्म पुगेर १० पटक फरक फरक ठाउमा फरक स्वाद र फरक दर्शकहरुमाझ हेर्ने मौका पाएको थिए । मंसीर १० गते लहानको भगवती मन्दिरमा अबको बाटो देखाउदै थिए साथीहरुले । अधिकांश दर्शक उत्सुक र भावुक भएर हेरिरहेका थिए । एक जना तराई मुलका दाह्रीवाल दर्शकको आँखामा टल्पल गर्दै आशु झरिरहेको रहेछ । मैले उनको फोटो जुम गरेर खिचें । मैले सोचें नाटक सफल भयो । कथा र कलाकारले गरेको मेहनत सफल भयो । दर्शकको अँखामा तव आशु बग्छ जब नाटकले उसको मनको कुरा बोल्न थाल्छ । मेरो वुझाईमा सफल नाटक त्यसलाई मान्न सकिन्छ जसले दर्शकलाई नाटक नसकुन्जेल वांधेर राख्न सक्छ अनि आंखा मन मस्तिष्कलाई भिजाउन सकोस ।
जे भएपनि एउटा राम्रो नाटक अनामले प्रस्तुत ग¥यो । कथा र कलाकार प्रभावकारी भएकाले यसलाई नाटक र भिडियोको रुपमा भएपनि सवै गाउ शहरमा पु¥याउनु पर्ने सुझाव सबैको थियो र म पनि त्यही सुझाव दिन चाहान्छु । किन भने अवको वाटोले दिन खोजेको सन्देश वर्तमान अवस्थामा जनताको लागी औषधीको काम गर्न सक्ने छ ।
एक जोडि जोइपोई घर आँगनमा विस्कुन खँदै गरेका कुखुरा धपाउद,ै भनाभैरी गर्दै गरेका हुन्छन । त्यतिकैमा मास्टर लिएर लिम्बु कान्छाको प्रवेश हुन्छ । लिम्बु कान्छा उनको मित भएकाले मास्टर जी संग परिचय गराउदै गाउमा एक जना साथीलाई अस्पताल पु¥याउन भनि उनिहरु बाहिर निस्किन्छन् । लिम्बु र उसका मित जोडि गाउमा आफ्ठ्यारो पर्दा सवैलाई सहयोग गर्दै हिड्ने स्वभावका हुन्छन् ।
गाउको परिवेष वदलिएको छ । प्राय सवै गाउलेहरु आ आपmनै राजनीतिक,जातीय समुहमा विभाजन भई सकेका हुन्छन । दुवै मीतहरु विच आ–आफ्नो जातीय समूहमा बोलाउदा नगएको निउमा मनमुटाव बढ्न थाल्छ । नाक चुच्चे र नाक थेप्चे सम्मको भाषा प्रयोग गरेर गाली गर्न थाल्छन् । त्यहँबाट समुदाय–समुदायसम्मको कुरा उठ्न थाल्छ । त्यसपछि दुवै जना आ आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्न खोज्दछन् । कोही आफ्नो जातीगत राज्य र पहिचान खोज्न थाल्छन्, कोही राज्य चाहिंदैन भन्न थाल्छन्, यसरी गाउमा पनि अन्यौल र अशान्त वातावरण बन्न थाल्छ । एक आपसमा तानातान, हानाहानको स्थिति सृजना हुन्छ ।
‘२००७ साल अगाडिदेखि ०६९सालसम्म आउदा कहिले जनआन्दोलनको नाममा, कहिले जनयुद्धको नाममा, कहिले झापा आन्दोलन, कहिले मधेस आन्दोलन गरी खोजेर, रोजेर मन पराएर ल्याएको लोकतन्त्र यहि हो ? समृद्ध समावेशी नया नेपालको नमुना यस्तै हुन सक्छ ? के यसैको लागि थुप्रै आमा बुवाहरुले आफ्ना सन्तान गुमाएका थिए ? हजारौं नारीहरुले आफ्नो सिन्दुर पुछेका थिए ? हजारौं बालबालिका टुहुरा बनेका थिए ? के यसैकालागि हजारौं युवा युवतिहरु घाईते, अपाङ्ग भएका थिए ? होइन भने किन कहिले जातीका नाममा, कहिले धर्मका नाममा , कहिले शिक्षाको नाममा त कहिले बेरोजगारको नाममा कहिले के को नाममा कहिले के को नाममा लडिरहेका छौं ? के यसै गरी लडिरहने हो त हामी ? होइन भने अबको हाम्रो गन्तव्य के ? अहिले देश यहिं आएर गाँठो परेको छ । यो गँठो खोल्ने कस्ले ? देश गाठो परेको छ । विकास गाँठो परेको छ । अब यो गाँठो कस्ले खोल्ने ? तपाई हामीले ।
तपाई हामीले खोल्ने हो देशको गँठो, निकासको गँठो । कुन बाटो जँदा खोलिन्छ ? अवको बाटो के ? तपाईहरु हेर्नु होस्, बुझ्नु होस्, महसुस गर्नु होस् अनि हामीलाई भन्नु होस् । लोकतन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ । छातीमा हात राखेर एउटा ईमान्दार नेपाली भएर भन्नु होस् अबको बाटो के ? यो प्रश्न यहँहरुलाई छाडेर जँदैछु ।
यो नाटकलाई तयार गर्न मुस्किल परेको थियो । किन भने यसमा लोकतन्त्र, समावेशी जस्ता कुरालाई घुसाउनु पर्ने थियो । नाटकको कथा, लेखन देखि प्रस्तुतिकरणसम्ममा झण्डै पन्ध्र बीस दिन ठूलो माथापच्ची गर्नु प¥यो । अन्ततः हामीले यस्तो नाटक तयार पा¥यौं जसलाई सबै दर्शकले मन पराई दिनु भयो । नाटकको सन्देश समय सापेक्ष भएकाले हामीलाई पनि गौरव लागेको छ । मलाई लाग्छ, लोकतन्त्र र समावेशी समाज निर्माणमा हाम्रोपनि यो सानो प्रयास निरर्थक हुनेछैन ।
नटक गर्न होस वा कुनै पनि कार्यलाई सफल बनाउनको लागि अति आवश्यक विषय नै व्यवस्थापन हो जस्तो लाग्छ । मलाई अनाम धरानका साथीहरुले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनु भएकोमा म साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । मैले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मेरो तर्फबाट रामै्र गरें जस्तो लाग्छ । समस्याहरु त धेरै आए तर त्यो समस्यालाई सहजै मेरो जिम्मेवारी सोचेर मैले ति समस्याहरुलाई कलाकारसम्म आउन नदिन नै मेरो जिम्मेवारी भएको हुँदा नाटक अवधीभरि नै म, मेरो काम र जिम्मेवारीप्रति इमान्दारीता पुर्वक कार्य गर्न सफल भएँ र आउने दिनहरुमा पनि मैले जिम्मेवारी पाएका कार्यहरु यसरी नै गर्दै जाने छु । विश्वास दिलाउन चाहान्छु । धन्यवाद ।